Vita ihany ny fanandramana hamaky magazay mpivarotra volamena an'ny tera-tany karana, na dia efa nihatra taman'aina mihitsy aza. Saingy mbola tsy nanana eritreritra izay hitodi-doha any an-tokantrano i Dera. Nifanena tamin'i Vola teny an-dàlana izy saingy tsy nahatadidy azy i Vola. Tany amin'ny trano famakiam-boky indray ny sedra manaraka.
Nifampisava talenta ireto tontakely tafaraka ka samy naneho niaraka izay manavanana azy. Rehefa tonga teo amin'ny anjaran'i Dera, dia nanjary zava-bitika taminy indray ny tsindrona sy ny sisika antony nandosirany ny tokantranony ka nahitany izao tsy fahita rehetra izao. Satriny na dia ho tonga tampoka izao ankehitriny izao aza ny fara andro mba tsy hiasany saina hamorona zavatra tsy fanao, izay efa andrasan'izy roa lahy namany.
Naseho ny : 19 mey 2020
Tonga hatrany amin'ny paositry ny polisy i Dera nohadihadiana momba ireo trangan-javatra nihatra taminy tsinahy. Izay niseho dia natrehany, na dia tsy avy aminy akory aza no antony nahatonga ny ankabeazan'izay nitranga. Nihatra taminy avokoa na fanaintainan'ny vatana, na fahasahiranan'ny saina, na fahaverezam-panahy. Reraka ihany no niafarany.
Pejy 8 amin'ny 58